Home » Toerana fitsangatsanganana » Nosy Pitcairn: Toerana masina mainty any Pasifika ary paradisa ho an'ireo mpizahatany astro
Ny Milky Way araka ny fahitana avy any Pitcairn dia fitsaboana iray indray mandeha mandritra ny androm-piainany ho an'ireo mpizahatany vitsivitsy izay miantso ny tenany hoe Astro Tourists. Ny lanitra dia tsy misy fetra amin'ny alina any amin'ny Nosy Pitcairn lavitra. Ireo nosy Pasifika ireo dia mihetsika indray eo amin'ny sehatra an'izao tontolo izao rehefa manomboka amin'ny dia ho lasa 'Dark Sky Sanctuary' ofisialy. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy afa-tsy toerana telo eto an-tany izay antsoina hoe 'Dark Sky Sanctuary' - fanondroana izay midika zavatra rehetra eto amin'ny tontolon'ny fizahan-tany Astro.
Ny Nosy Pitcairn, amin'ny fomba ofisialy Pitcairn, Henderson, Ducie ary Oeno Islands, dia vondron'ireo nosy volkanika efatra any amin'ny faritra atsimon'ny Oseana Pasifika izay mahaforona faritany teratany britanika any Pasifika atsimo.
Ireo nosy efatra - Pitcairn mety, Henderson, Ducie, ary Oeno - dia niparitaka manerana ny ranomasina an-jatony kilaometatra ary manana velaran-tany mitambatra manodidina ny 47 kilometatra toradroa (18 sq mi). Ny Nosy Henderson dia mitentina 86% ny velaran-tany, fa ny Nosy Pitcairn ihany no misy mponina.
Pitcairn no faritany nasionaly kely mponina indrindra eto an-tany. Ny mponin'i Pitcairn dia foko misy foko roa samy hafa fiaviana avy amin'ny sivy fiantranareo ireo mpikomy sy ireo teratany tahitianina vitsivitsy izay niaraka tamin'izy ireo, hetsika iray izay naverina navoaka tamin'ny boky sy sarimihetsika marobe. Ity tantara ity dia mbola miharihary amin'ny anaram-bosotra maro an'ny Islanders. Ankehitriny dia tsy misy afa-tsy mponina maharitra 50 eo ho eo, avy amin'ny fianakaviana efatra lehibe.
Manomboka amin'ny fihaonana amin'ny tako-masoandro manontolo ka hatrany amin'ny atrikasa fanaovana sary hazavana Avaratra Avaratra, indostrialy mitombo haingana ny Astro fizahan-tany. Tao anatin'izay taona faramparany izay dia nambara ho mpitarika indostrialy ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany ao amin'ny Astro fizahan-tany ary koa ireo orinasam-pitaterana maharitra. Noho ireo antony ireo sy ny maro hafa, Pitcairn dia avo roa heny amin'ny Astro fizahan-tany amin'ny alàlan'ny fangatahana ho lasa 'Dark Sky Sanctuary' amin'ny 2018.
Ny fampiharana an'i Pitcairn dia ho matanjaka ary azo antoka ary tsy izany no fanondroana fikatsahana aina voalohany notadiavin'ny nosy. Tamin'ny taona 2015, nantsoin'ny Fanjakana Mitambatra ny rano nanodidina ny Nosy Pitcairn ho faritry ny ranomasina voaaro lehibe indrindra manerantany. Androany izy no mijanona ho faritra voaaro an-dranomasina faha-3 lehibe indrindra manerantany. Ny fanoloran-tenan'i Pitcairn tamim-pahamendrehana amin'ny fiarovana azy ireo dia hiantoka ny hareny voajanahary hijanona ho madio mandritra ny taranaka fara mandimby. Any amin'ny 500kms mahery no misy azy avy amin'ny mpifanila vodirindrina aminy akaiky indrindra, any amin'ny Pasifika atsimo, ny Nosy Pitcairn dia eo afovoan'ny ranomasimbe sy lanitra matanjaka indrindra manerantany. Ankoatr'izay, misy mponina 50 monja, ary faritra volkano izay manome isa isan-karazany ny fijerena azy, apetraka i Pitcairn mba hanomezana izay ilain'ny Astro fizahan-tany.
Amin'ny maha dingana voalohany azy eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany Astro, nanasa ny Profesora Emeritus an'ny Astronomia ao amin'ny University of Canterbury, John Hearnshaw, i Pitcairn mba hitsidika ireo nosy amin'ny volana febroary 2018. Ny andraikiny dia ny fanombanana ny fahafahan'ny nosy ho an'ny fizahan-tany Astro satria mifandraika amin'ny fiofanana momba ny torolàlana amin'ny lanitra amin'ny alina, ny scouting amin'ny toerana ary ny fanarahana hazavana. Lohahevitry ny fiofanana miaraka amin'ny torolàlana Astro an'i Pitcairn, izay ahitana torolàlana, kintana, nebulae ary vahindanitra, fanakonam-bolana sy fanakona-masoandro, famantaranandro amin'ny astronomia, lavaka mainty, quasars ary cosmology
Miaraka amin'ny toerana voatondro sy fiofanana ho an'ny mpitari-dalana ao an-toerana manomboka ny volana febroary 2018, ny dingana manaraka nataon'i Pitcairn dia ny hangataka ny fanondroana azy hoe 'Dark Sky Sanctuary'. Raha nahazo io voninahitra malaza io i Pitcairn dia hiditra amin'ny laharam-pahamasinana telo misy eto ambonin'ny tany, anisan'izany ireo faritra lavitra any Chile, New Zealand, ary New Mexico.
Nanao izany fanambarana izany, ny Coordinator momba ny dia any Pitcairn, Heather Menzies dia nilaza fa: "Pitcairn dia manana skyscapes mainty mahatalanjona. Mifanaraka amin'ny fanoloran-tenantsika hiaro ny tontolo iainantsika, dia mikendry ny hitarika ny fiainana an-tampon'ny alina fijerena lanitra any Pitcairn izahay. Amin'ny maha-nosy madio sy lavitra toy izany antsika, ny amphitheater voajanahary dia hanome toerana tsara ho an'ireo mpitsidika Astro tsy sahy. ”
Any afovoan'i Nouvelle-Zélande sy Peroa, Pitcairn no nonenan'ny taranaky ny mpikomy HMAV Bounty hatramin'ny 1790 ary mijanona ho iray amin'ireo toerana fizahan-tany lavitra sy mbola tsy hita eran'izao tontolo izao. Ity fahafaha-manao vaovao ity dia hanome antony hafa mahaliana ny mpitsidika hitsidika ity toerana mahavariana sy lavitra ity.
Ny fidirana mankany Pitcairn dia amin'ny alàlan'ny serivisy fandefasana isan-telo volana izay manolotra dia miverina 12 isan-taona eo anelanelan'ny Mangareva any Polinezia frantsay sy ny nosy Pitcairn.